Khilaafka labada Aqal ee Soomaaliya muxuu salka ku hayaa? ( Faalo) – Radio Daljir
Khilaafka labada Aqal ee Soomaaliya muxuu salka ku hayaa? ( Faalo)
Juunyo 28, 2019 11:19 b 0
Sida ku cad cutubka lixaad qodobka 55aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka Soomaaliya, goleyaasha sharci-dejinta dowladda waa labo gole: Golaha shacabka iyo Golaha aqalka sare, waxeyna masuuliyaddaha sharci-dejinta u gutaan si waafaqsan madaxa afraad ee dastuurka oo ku saabsan habraaca sharci-dejinta haarka qaran. Sidoo kale qodobbada 63, 76, iyo 83 ayaa si cad oo waadix ah uga hadlaya awoodda sharci-dejinneed ee gole kasta. Marka laga soo tago sharciga dejinta miisaanniyadda sanadlaha ah ee xukuumaaddu eey sameyso ma jiro sharci kale oo labada gole eeysan bilaabin/unkin oo dalka ka dhaqan geli kara.
Suaallahan ayaase u baahan in si maangal ahi loogaga jawaabbo. 1) si sharci cusubbi loo curriyo, maxuu yahay waajibka labada gole uga aadan currinta sharcigaas cusubbi? 2) Gole heese xaq u leh in uu bilaabo currinta sharcigaas? 3) Maxaase loo baahan yahay si sharcigaas u noqdo mid ansaxa?. Inta eeynan suaallahaas u raadin jawaabo waafi ah, ugu horeyn aan isla fahamno halka eey sartu ka qurunsan tahay.
Dalka Soomaaliya waxuu dowladnimo meel-ku-gaar ah ka baxay sanadki 2012ki, ku dhawaaqid afka ah iyo lab-lakac mooyee ma jirin ifafaallo cad oo muujinneysa in dalka laga saaray ku meel gaarkii. Ma jirin dastuur lagu ansixiyey afti dadweyne, sidoo kale nidaamka dowladdeed ee dalka lagu maamullayo leys lama meel dhigin oo talo ummaddeed laguma qaadan federaalka. Ma doonnayo in aan abuuro muran ah dalku ma ka baxay ku meelgaarnimdi, balse shuruuddaha leys kaga baahan yahay si dal xaaladdaas uu uga baxo, dowlad rasmiyana u helo ayaa ah kuwo duran. Federaalku astaamihiisa ugu caansan waxaa ka mid ah in dal walba oo ku dhaqmayaa uu ku qasban yahay in baarlamaankiisu uu ka koobmo labo aqal: aqal matalla shacabka, iyo mid ka shaqeeya isku xirka dowladda dhexe iyo ismaamul gobolleedyada (federal member states) sida Brazil, Germany, Ehiopia, iyo USA, si loo ilaalliyo danta guud ee qaranka iyo midda gaar ahaanneed ee gobolka. Federaalku waa nidaam qaali ah oo ku dhaqankiisu wuu ku adag yahay dal miisaaniyyaddiisa sanadlaha ah aan maaareyn karin kabid dibaddeed la’aanteed sida keenna oo kale.
Haddaba khilaafkan hareeyey labada gole sharci-dejinned ee dalka halkee buu salka ku hayaa?
Waxaa jira waxyaabo badan oo xoggahoo igu yar darteed aan uga gaabsannayo, labadaan qodob ayaanse aaminsanahay iney asaas u yahiin khilaafkan soo bilawday bilawgi 2017ki:-
1)Daneysi shaqsi, iyo 2)Ku-dhaqan la’aan sharci.
Ugu horeyn golaha shacabka ayaa magaca baarlamaanka ku soo shaqeynnayey muddo shan sano ah oo la sheegayey inuu dalku ka baxay ku-meegaarnimadi, muddadaasi waxaa guddoominnayey baarlamaanka mudane Jawaari oo ah nin sharciyaqaan ah,waaya-aragna ah oo waqti dheer u soo shaqeynayey dalka kana soo qabtay xilllal siyaasaddeed, ka sokow aqoontiisa qotada dheer iyo waaya-aragnimadiisa mudane Jawaari waxaa aad loogu dhaliillay in uu si shaqsi ah ugu daneysannayey xilka hoggaaminneed ee uu ka hayey baarlamaanka dalka, waxaa kale oo uu ka faaideystay maqnaanshiyaha golaha aqalka sare oo haddii uu jiri lahaa shantaas sano wax badan oo golaha shacabka si gaar ah isugu koobayey la qeybsan lahaa. Mudane jawaari waa uu ogaa in dowladda dhalan doonta 2017ka baarlamaankeedu ka koobnaan doono labo aqal, sidaas darteed waxuu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay in uu mooso oo wax badan isku dayo in uu maqaar-saar ka dhigo golaha aqalka-sare, haddaba si eey ugu suurta gasho arrintaas waxuu waqti dheer galiyey sidii uu dastuurka ku-meelgaarka ah uga dhigi lahaa shaar isaga la eg, waxuuse ku xisaabtamin in xilku meerto yahay, sidi uu Shariif xasan u gala wareegay si la mid ah uu isagana qof kale kala wareegi doono xilka. Iimaan daradaas siyaasaddeed ee mudane Jawaari waxeey kaloo sababtay in uu ku daarto masuulki xilka kala wareegay, waa Maxamed Mursal e oo wax walba oo uu Jawaari xeeladdeystay u heysta wax sax ah.
Waxaa kaloo iyana jirta ku-dhaqan la’aan dhanka sharciga ah oo iyana keenneysa mar walba labada aqal in eey isku qabtaan arrimo laga maarmi lahaa isku qabashadooda haddii dastuurka loo noqon lahaa. Tusaale, labadi miisaaniyadood ee xukuumaddan hadda jirta eey soo diyaarisay midna aqalka sare ka ma uusan qeyb qaadan ansixinteeda oo waxaa mar weliba isku koobayey golaha shacabka kaliya, arrintaasi oo ah meel ka dhac loo geystay dastuurka dalka waayo sharci ansixi karaa oo madaxweyne la horgeyn karaa ma jiro haddii uusan labada aqal soo wada marin. Suaasha ahse unkidda sharciga iyo currintiisu aqalkee ayuu ka bilaabmayaa waxey u baahan tahay in qormooyin kale lagu faahfaahiyo.
Ugu dambeyn baaqeygu waa in xal degdeg ah loo hellaa khilaafkan u dhaxeeya laanta sharci-dejinta oo labadii sano ee la soo dhaafay soo jiitamayey, haddaba si loo xalliyo goldaloolladaas iyo murankaas aan micnaha laheyni loo gana baxo mushkiladdan taagan ee curyaamisay waxqabadki baarlamaanka waxaa loo baahan yahay is-aqbal, isu-tanaasul iyo isla-guddoomin oo waqtiga haray aad ayuu u yar yahay, ammin iyo ilbiriqsi walbaana aad ayeey qaali u yihiin. waxaan aaminsanahay in la taagan yahay xilligii la fahmi lahaa dantaguud ee mujtamaca Soomaaliyeed, meelna la iska dhiggi lahaa danaha shaqsiga ah ee ku dhisan indhow garadnimada. Waa in la kala saaraa khilaafka shaqsiga ahi iyo waxa guud ahaan inaga dhaxeeya, sidoo kale waa in la gaara xilligi aan maskax ahaan u kori laheyn oo waa halkii uu abwaan Gaarriye ka lahaa tuducyadan soo socda ee ku jiray maansadi Gurmad:
Waxaa qoray: Cali Cabdiraxmaan Shifti (Cali Ugaas)
Warka Duhurnimo iyo Cabdiraxmaan Xudayfi (dhegayso)
6 Ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay degaanka Ceelasha Biyaha (Daawo)